Nageenya Lixa Oromiyaa: ‘Du’a sodaannee qe’ee keenya dhiisnee baqanne’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNageenya Lixa Oromiyaa: ‘Du’a sodaannee qe’ee keenya dhiisnee baqanne’
(bbcafaanoromoo)–Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaatti uumameen keessumaa jiraattonni godinaalee Qeellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa rakkoo hamtuu keessa seenuu himatu.
Iddoowwan kanneenitti rakkoo yeroo yeroon mudatuun lubbuu namaa irra miidhaan gahaa akka jirus yeroo hedduu himama.
Gareen gaazexessitota BBC dhiheenya kana gara sanatti imales waan ofiin taajjabaniifi jiraattoota irraa dhagahan akka asiin gadiitti qindeessineera.
Jiraattoonni maal jedhuu?
Jiraattoonni godinaalee lameen Qeellem Wallaggaafi Wallagga Lixaa irraa ta’anis rakkoo gahaa jiru baqatanii Magaalaa Naqamtee jiran dubbisneerra.
Godina wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii irraa baqatanii dhufuu kan himan ga’eessi umurii 42 maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne tokko rakkoon Oromiyaa gara lixaa jiru hamma himamuun olitti hammaataadha jedhu.
Naannoo isaan irraa baqatan kana halkanis ta’e guyyaa nageenyi akka hin jirreefi sochiin hundi yaaddoodhaan kan guutame ta’uu himu.
“Nagaan waan hin jirreef guyyaa yoo birrii baattee waraana mootummaa sodaatta, halkan manakee birrii yoo bulchatte waraana bosona jiru sodaatta. Kanaafuu daldaluunis ta’e, bahanii galuun baayyee ulfaataadha” jedhu.
Yaaddoo kanarraa ka’uunis isaan dabalatee namoonni hedduun qe’ee isaanii dhiisanii godaanuuf akka dirqamanis himu.
“Ummanni kan humna qabu wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaa keessaa baqataa jira.inni kuni ni ajjeesa inni sunis ni ajjeesa. Lamaan kana gidduutti namni du’a baqaa qe’ee ofii sagantaa ofii hunda dhiisee deemaa jira “Jedhan.
Du’a baqachuuf lafa namni itti du’urraa baqachuufi nageenya barbaacha lafa nagaan jirutti dhokannee jiraanna jedhu namni BBC’n dubbise kuni.
Uummanni waraana mootummaafi waraana hidhatee bosona jiruun akkaataa itti miidhamaa jiru yoo himanis, “Yoo guyyaa waraanni mootummaa sidubbisee darbe waraanni bosona jiru ammoo basaastudha jedhee halkan dhufee si fuudha. Basaastuu ta’uufi dhiisuukeeyyuu osoo hin qulqulleefatin tarkaanfii namarratti fudhata jedhan.
“Waraanni mootummaammoo jarri bosonaa eda asturani, sintu buddeena kenneef jedhanii uummata hunda gadi yaasee walitti qabee garafa. Uummanni keenya gara lamaanittuu du’aa jira” jedhan.
Waraanni hidhatee bosona jiru nama qabe hunda basaastuudha jedhee waan yaaduuf tarkaanfiin fudhatu daran hammaachuus himu namni kuni.
Nannoo rakkoon nageenyaa jiru kanatti uummanni gadi bahee hojii idileesaa hojjechuu waan hin dandeenyeef uummanni beelaf saaxilamaa akka jirus himan.
“Uummanni qaama hidhatee bosona jiru kana himaa yoo jedhaman lubbuu ofiitiif waan sodaatuuf hin himu. Mootummaanis jarri kuni hawaasa keessa waan jiraniif argee sassaabuu hin danda’u. Waraanni hidhatee jiru kuni uummata keessa kan dhokatee jiru,” jedhan.
Ofii isaaniitiif bakka irraa baqatan kanatti hojii daldalaa hojjechaa turuu kan himan namni kun, waggaa lamaan kana hojii daldalaa sirnaan hojjechuu waan hin dandeenyeef liqii baankii kaffaluu akka hin dandeenyes himu.
“Amma godinaalee wallaggaa keessatti sochiin daldalaa gara dhaabbachuutti deemeera. Ji’a jaha yookan waggaa tokkoon booda namni waan nyaatuyyuu rakkachuunsaa waan hin oolle” jedhan.
Waraana hidhate lama gidduu teenyee nagaa argachuu dadhabuun baqanne, du’a sodaannee qe’ee keenya gadhiifnes jedhan. Bakka isaan irraa baqatan kanatti uummanni jiraatu egereen isaani akka isaan yaddessus himan.
Filannoo baranaa ilaalchisee…
Filannoon barana adeemsifamuuf jiru kan ilaaleenis, naannoo rakkoon nageenyaa jiru kanatti filannoo walabaa taasisuun waan hin yaadamneedha jedhan.
“Filannoon yoo nagaan jiraate. Bakka namni lubbuu isaatiif yaadda’utti kuni waan hin yaadamnedha.nama walitti qabdee mariisisuu hin dandeessu. Lama sadii taateeyyuu hin dhaabbattu.
Biyya jiraachuu hin dandeenye keessatti filannoon akkamitti gaggeefama? jechuun gaafatu.
“Waraanni lama osoo achi keessa jiruu eenyutu dhaqee kaardii fudhata? Eenyutummoo danda’ee kaardii sana danda’ee deebisa?
Osoo ati guyyaa waajjira mootummaatii kaardii fudhattee galtee galgala kan dhufee sirraa fuudhee cirutu jirahoo,” jechuun yaaddoo isaanii BBC’tti himan.
Uummanni Oromoo dur tokkummaan dhaabbatee waldhagahee sagalee waliif akka ta’u himuunis, amma tajaajilli qunnamtii naannoo isaaniitii waan cufameef rakkoo gahaa jirullee akka gaariitti waliif qooduuf hudhaa akka ta’es dubbatan.
‘Naannoo keenyatti xiqqaanis guddaanis sodaadhaan jiraata’
Dargaggoon Godina Qellem Wallaggaa irraa baqatee Magaala Naqamtee jiraatu kan biraan yaada BBC’f kenneen, Godinaalee Oromiyaa irraa addatti Komaandi poostii jalatti buluunuu xinsammuu uummataa miidhaa jira jedha.
“Naannoo keenyatti xiqqaanis guddaanis sodaadhaan jiraata. Yeruman afgaaffii kana siwaliin taasisaa jiru kanallee yaaddoo meeqatu natti jira. Yoo na argan maal akka nagodhan waanin beekuf jechuudha.haalli jiru baayyee yaaddessaadha” jedha.
Lolli kuni lola obbolaa gidduutti taasifamaa jiru waan ta’eef waraanan furmaata argata jedhee akka hin yaannes hima.
“Qaamni lamaan osoo mariidhaan dippilomaasiidhaan rakkoo isaanii furatanii feena. Sababa isaanitiin uummanni rakkoodhaan lafatti rirriitamaa jira,” jedha.
Haalli nageenyaa kuni baadiyyaatti kan magaalaa caalaa hammaataa ta’uu fi fooyya’iinsa kan hin mul’isne ta’uus hima.
Magaalli Naqamtee magaalota Gimbii fi Dambidoolloo irraa nageenya fooyya’aa kan qabdu waan ta’eef, namoonni sodaa nageenyaaf bakka jiraatan gadhiisan achitti daheefatanii jiraatu.
Sochiin dinagdees guyyaa hoo’aadha. Galgala sa’aatii tokkoon booda garuu namni daandirra socho’u baayyee xiqqaata.
Baajaajonni tajaajila geejjibaa kennanis magaalatti keessa galgala sa’aatii tokko booda socho’uun dhorkamaadha. Kanaafis sa’aatii 12 dabarraan konkolaachiftoota baajaajii “sa’aatiin nutti gahaa jira” jedhan dhagahuun baratamaadha.
Magaalichatti baajaajiin balbala godhatanii oofuun waan dhorkameefis baajaajii balballi hundi banaa ta’ee deemu arguunis waan magaala biraatirraa adda ta’ee argineedha.
Magaalatti keessa qaamni nageenyaa bakka hedduu qubatee waan jiruuf daandiiwwan irratti mallattoon “lafoon asiin darbuun dhorkaadha” jedhu niheddummata.
Namni haaraa magaalatti seene rakkoo nageenyaa adda ta’e arguu baatus jiraattonni garuu ” yoo boombiin darbatame kan karaatti argame hundatu reebama” waan jedhaniif nagaa ta’us yeroon galuu filatu.
Waliigala Naqamteen komaandpoostii jalatti guyyaa sochii hoo’aa galgala daldalli yeroon cufamee, namni yeroon galee callisa keessa galgaleeffatti.